Kungani ngiphethwe yikhanda?
Ukuqala ingxoxo mayelana ubuhlungu syndrome, kufanele kuphawulwe ukuthi ukuze kutholakale imbangela cishe ubuhlungu kungenziwa zendawo. Ngokwesibonelo, wanikeza ikhanda ekhanda, cishe okubangwa izinkinga emgogodleni. Ngakho-ke, lahla ubuhlungu kuphela ingelapheka emuva. Uma sikhuluma izifo ezithile, kumelwe kuphawulwe lokuqala zonke ongaphakeme iqolo, spondylosis futhi umbhunu we disc intervertebral.
Kanjani ubuhlungu kwenzeka?
Ngakho yiziphi izinguquko emzimbeni inhlamvu izimpawu ezifana kuyinkinga enkulu ngemuva ekhanda? Lapho osteochondrosis e emaphethelweni osteophyte vertebral sikhule - imfundo olunamandla. Lapho umuntu ehamba entanyeni, befohla endaweni izicubu ezithambile kanye imithambo yegazi, ngokwemvelo ebangela kabi entanyeni, okuyinto nakakhulu lapho eguqa. Ikhanda elibuhlungu ubuhlungu ngemuva ekhanda kulesi simo sihambisana isicanucanu nesiyezi. Isiguli kungase esekhala tinnitus nokulahlekelwa kokuxhumana.
Emaphilisini ekhanda entanyeni kubangelwa umbhunu ngenxa yokuthi ukuthi yayifanekisela nomxhantela yomgogodla babancwebe ngaphakathi imithambo yegazi nezinzwa. Xilonga umbhunu ilula: kusukela amajaqamba ikhanda kunikezwe encwadini ethi ingalo, kalula ngenkathi ndikindiki.
Lesi sifo libhekene angakwazi emisipheni ku bone izicubu; intamo ukuhamba iba elinganiselwe. Ikhanda ngemuva kulokhu paroxysmal ngokwemvelo; ke kancane kancane uya emathempelini phansi ngezansi kwamahlombe akhe, okwandisa nge zonke ukunyakaza.
Ukukhuluma mayelana nokwelashwa, kufanele kuphawulwe ukuthi umuntu uhlushwa ubuhlungu chronic kumele lithathwe nguchwepheshe. Ukuhoxiswa izimpawu wedwa akunzima, kodwa kubalulekile ukuba kuqedwe imbangela.
Yini ikhanda? Abaningi kulokhu kuqale ukuze ujike iKhabhinethi ikhaya imithi befuna amaphilisi Nurofen, kodwa lokhu akudingekile. Kukhona inala izindlela abantu ngempumelelo. Ngokwesibonelo, ngokuhlasela sebuhlungwini obunzima angasuswa ngosizo oregano abavamile - Baphehl ingcosana amakhambi e-amaqabunga tea. ukusetshenziswa njalo lokhu itiye ngeke kuyokuqeda imisipha ukungezwani futhi ukusiza ekuvuseleleni izindawo imithambo yegazi. Futhi e ahlekise kusiza kahle cindezela lovage - I-ekuwulungiseleleni Qoba amahlamvu fresh futhi ugcwalise kubo ngamanzi ashisayo. Abaningi bathi ukuba abhekane ngokuphumelelayo nesitha ikhanda, ungasebenzisa umcamelo elimnandi nge zikagamthilini kanye Edelweiss.
Ngakho, manje uyazi ukuthi ukuphuza ikhanda. Nokho, lokhu akusho negate isidingo sokwelashwa. Okokuqala, kumelwe wenze okuyikona - salokhu okudingeka uyenze x-reyi yomgogodla wesibeletho nama-MRI. Uma ngesikhathi sokuhlolwa kuvela ukuthi ukuqaleka yinto okubangwa ezinzwa babancwebe, ukuphathwa uzogxila akhululwe. Kulokhu kahle ukusiza massage and egqoke vorotnika- ekhethekile wamathambo "esiphikeni." Uma uke kwatholakala spondylosis, esikhundleni massage lizokwabelwa yokwelapha manual, Physiotherapy futhi electrophoresis. In parallel inkambo main yokwelashwa kungcono ukuthatha ubuhlungu futhi antispasmodics. Zonke lezi zinyathelo kuyosisiza ukuba balahle kokuzama wezakhiwo.
TV "Ruby": ukubuyekezwa, ngokwezifiso, imfundo, ukulungisa
Kwamacala abucayi kanye sibi kakhulu futhi ngezigaba zabo
Amabhayisikobho best mayelana stock market